Golaha Ammaanka Ee Qaramada Midoobay Oo Loo Gudbiyay Warbixin Ka Hadlay Tacadiyada Xuquuqda Aadamaha Ee Soomaaliya | #1Araweelo News Network
New York(ANN)-Golaha amaanka ee Qaramada Midoobay, ayaa loo gudbiyay warbixin xanbaarsan naxdin iyo murugo oo ka hadlaysa tacadiyada ka dhanka ah Xuquuqda Aadamaha ee ka dhacaya Soomaaliya.
Warbixintaa oo Hay’adda xuquuqul Aadamaha ee Human Ritgh Watch Qaramada Midoobay, ayaa la gaadhsiiyay golaha amaanka.
Human Rights Watch, waxay warbixinteeda ku muujisay dhibaatooyinka xuquuqda Aadamaha ee ka dhacaya Soomaaliya, iyadoo wax laga argagaxo ku tilmaamtay korodhka tacaddiyada kufsiga ee ka socda Soomaaliya iyo gabaood falada kale.
Warbixinta waxaa lagu sheegay in kufsiyo aan kala sooc lahayn loo geystay haweenka, gabadhaha ah iyo wiilasha yar yar, iyadoo markaa kaddib la khaariyo qaarkood.
Human Rights watch ayaa ugu baaqday masuuliyiinta Soomaaliya inay si dhakhso lah u dhaqan geliyaan sharciga Dembiyada Jinsiga ee ay ansixiyeen Golaha Wasiirada Dawladda Federaalka muddo laba sannadood laga joogo.
Dhinaca kale, Hay’adda ayaa dhiirrigalisay go’aanka magacaabista dacwad oogge khaas ah oo baadhitaan ku sameeya dilalka saxafiyiinta ee Soomaaliya.
“Waa lagama maarmaan in madaxda Soomaalidu ay garwaaqsadaan oo ay ilaaliyaan xuquuqda iyo xorriyada dadkooda ay u leeyihiin inay si xor ah u soo bandhigaan aragtidooda, isla markaana ka ilaaliyaan suxufiyiinta xadhig sharci darro ah, dhibaatooyin cabsi gelin iyo weerraro loo geysto oo ay ku jiraan dil,” ayay Warbixinta ku tidhi, Human Rights Watch.
Dhinaca kale, waxa la filaaya in golaha amaanku kasoo saaro qaraar marka uu derso warxbintaa ka hadlay xad-gudubyada iyo dhibaatooyinka xuquuqda Aadamaha ee Soomaaliya.